Amagi Brilliant Park ma mudan tahay in la daawado? - Muuqaalka Cradle
1 Comment on Amagi Brilliant Park ma mudan tahay in la daawado?
Dulmar - Amagi Brilliant Park Worth daawasho ma tahay?
Amagi Brilliant Park waxay lahayd sheeko xiiso leh oo soo jiidasho leh fikradayda, waxayna inta badan ku saabsan tahay soo celinta iyo badbaadada beerta madadaalada ee dhimanaysa ee uu leeyahay jilaaga ugu wayn Seiya Kanie. Waxaan u jeedinayaa Amagi Brilliant Park sida ABP, markaa ka digtoonow. Waxaan u helay jilayaasha inay yihiin kuwo la xasuusan karo, laakiin intooda badan runtii waan necbahay. Tani waxay ahayd sababta oo ah waxay ahaayeen kuwo aad uga cadhooday oo aad uga xumaaday, xitaa heerarka anime. Si kastaba ha ahaatee, dad badan ayaa u muuqda inay fikrad ka duwan ka qabaan ABP, waxaanan ogaaday inay dad badani jecel yihiin, inkasta oo aanan heli karin inay ku taliyaan meelo badan oo ay aad iigu adag tahay inaan sidoo kale helo.
Marka la eego horumarinta dabeecadda iyo xiriirka jilayaasha, waa nooc ka mid ah ma jiraan. Annagu ma aragno haddii ay jiraan, horumar badan oo dhan oo u dhexeeya jilayaasha, sidaas darteed ha u helin rajadaada haddii aad raadinayso qaar ka mid ah walxaha nooca xiisadda galmada ee u dhexeeya jilayaasha, maadaama aysan jirin wax badan. Markaa ABP ma mudan tahay in la daawado? Taasi waa waxa aan ka geli doono blog-kan, markaa sii wad wax akhriska. Sidoo kale maqaalkani waa labadaba Amagi Brilliant Park Review iyo liiska sababaha Amagi Brilliant Park uu yahay ama aan mudnayn in la daawado.
Oh, oo dhegayso laxankooda mawduuca haddii aad rabto, waxaan u arkay inay tahay mid xusuus leh:
Amagi Brilliant Park – Furitaanka | Saacada Sixirka Dheeraadka ah
Sheekada Guud - Amagi Brilliant Park Worth daawasho ma tahay?
Waxaa laga soo qaatay "Amagi Brilliant Park" Qaybta 5
Sheekada guud ee ABP waa mid aad u fudud, waxaanan runtii jeclaystay sida sheekada loo dhigay. Aad iigu adkayn in aan fahmo waxa ay dejisay sheeko nooceed xallin mushkilad fudud, oo ay ku jiraan sheekooyin hoose oo aad u qosol badan oo madadaalo leh. Sheekadu waxay ka bilaabantaa Seiya Kanie, oo ah ardayad dhigata dugsiga sare oo Isuzu Sento uu isna arday ka yahay. Sheekadu waxay inta badan saameyn ku leedahay Amagi Brilliant Park Istaahila in la daawado ama ma aha, sababtoo ah ma aad laalaadin doontid jilayaasha ama wada hadalka, taasi waa hubaal.
Sento wuxuu ugu hanjabay Kanie rabshad jireed haddii uusan ka caawinin ujeeddadeeda badbaadinta ABP maadaama ay tirade dadka soo booqday ay ka hooseeyeen 500,000 muddo 4 sano ah iyo haddii ay wali ka hooseyso 500,000 oo soo booqda dhamaadka bisha markaas beerta ayaa laga iibiyaa shirkad gaar loo leeyahay iyo qof kasta oo ka hoos shaqeeya beerta waxaa laga dhigi doonaa shaqo dhimis. Qeybta labaad waxaan ku aragnaa in Sento uu doonayo Kanie inuu noqdo maamulaha jardiinooyinka wuuna aqbalay.
Kanie wuxuu muujinayaa sida uu u karti badan yahay qaybaha dambe iyo qaybta labaad marka uu jeedinayo khudbad dhiirigelin ah oo ku saabsan gobolka parks curren iyo qof kasta oo ka shaqeeya halkaas. Beerta lagu nasto waa in la mariyaa dhowr istaadiyo bisha si loo soo jiito dad badan. Kuwaas waxaa ka mid ahaa duubista muuqaal "Walaalaha” Iyagoo xidhan suudhadh dabaasha oo aad u muuqda oo ku dhawaaqaya erayo doqonimo ah marka ay qoob ka ciyaarka wadaan, ka dibna fiidiyowyada ku dhejinaya khadka internetka si ay u soo jiidaan dad badan oo soo booqda. Waxay abuureen heshiisyo ay ka mid yihiin "Wax walba oo loogu talagalay ¥30". Dhaqdhaqaaqyada sida caadiga ah way shaqeeyaan, booqdayaasha ay helaan maalin kasta si weyn ayay kor ugu kacaan, sida iska cad aad ayay ugu dhow yihiin tanina waxay ka dhigaysaa nooc aad u daran.
Jidka jilayaasha ugu muhiimsan, inta badan Sento iyo Kanie waa inay la tacaalaan dhibaatada dhimashada Princess Latifa, oo ah amiirad boqortooyo sixir ah oo loo yaqaan "Mapel Land". Jilayaasha Maple Land waa kuwo aad u yaab badan oo dhibsado. Waxay qaataan qaabka mascots-ka Japan ee caadiga ah sida Moffle. Waxaan u baahanahay in aan sheego in codkooda ay aad u dhibsadaan waxaana marar badan isku arkay aniga oo la yaaban sababta aan u daawanayo taxanahan marka muuqaalada gaarka ah ee Mascots ay muujinayaan, markaa la soco. Waxaa daaha laga qaaday in amiirad Latifa ay dhiman doonto haddii beerta lagu guuleysan waayo. Waxa kale oo la daaha ka qaaday in aanay dhaafin da'da 14, oo ay si joogto ah ugu sii jirto da'dan, waligeedna korin. Wax fikrad ah uma hayo sababta, laakiin kuma aan dhibin inaan dib u daawado si aan u ogaado, kaliya ma xiisaynaynin.
Ma hubo in ay aniga kaliya ahayd, laakiin waxaan u maleeyay in Sento si jaceyl ah loogu maalgeliyay Kanie, laakiin dhab ahaantii ma qaadi karo haddii ay dhab ahaantii jeceshahay isaga, ama haddii ay rabto waxa ugu fiican beerta. Way sii waday inay isku daydo inay hogaamiso waxaan u maleeyay, laakiin si kastaba ha ahaatee, taasi meelna ma tagin, sida inta badan jilayaasha taxanaha ah.
Jilayaasha ugu muhiimsan - Amagi Brilliant Park mudan in la daawado?
Seiya Kanie waa arday dhigta dugsiga sare ee caanka ah oo Sento uu dhigto. Waxa uu soo bandhigay shakhsiyad narcissistic sababtoo ah shaqadiisa xiddig caruur ah markii uu ahaa 5. Wuxuu inta badan la hadlaa dadka kale oo uu kula hadlaa manor wax duminaya. Tani waxay ka dhigaysa isaga guud ahaan mid aan loo adkaysan karin oo ima siiso qof aan u naxariisto. Isagu waa mid soo jiidasho leh oo soo jiidasho leh.
Aad buu ugu kalsoon yahay tanina waxay hoos ugu jirtaa muuqaalkiisa, inkasta oo shakhsiyadiisa ay tahay mid aad looga cadhooday oo aan la arki karin, wuxuu ku daraa hoggaan aad u wanaagsan iyo xirfado xalinta dhibaatooyinka taasoo ka dhigaysa mid la yaab leh. Waxa uu si fiican u maamuli karaa lacagta iyo xisaabaadka tanina waxa ay ka dhigaysaa in uu si hufan u noqdo maamule.
Inkasta oo ay u muuqato in Sento iyo Kanie ay noqon doonaan ciyaar wanaagsan, sababo jira awgeed, waligiis uma muuqan inuu Sento ku arkay habkaas, waxaana filayaa in tani ay aad uga careysiisay Sento iyada oo inta badan ay ceebayso isaga oo loo muujiyo inuu yahay mid aad u badan. maamule ka fiican sidii ay weligeed ahayd.
Isuzu Sento sidoo kale waa ardayad wax ka barata dugsiga sare ee Kanie ay dhigato, fikradaydana aad ayay u caajis badan tahay. Sababaha qaar qorayaashu waxay u maleeyeen inay fikrad fiican tahay in Sento uu had iyo jeer ku hadlo cod monotone ah. Tani waxay ka dhigan tahay dhammaan qoraallada ka soo baxa afka Sento waxay u dhawaaqaan isku mid, mana jiraan wax isbeddel ah oo codkeeda ah. Tani waxay ka dhigaysaa dabeecadeeda mid aad u xanuun badan oo argagax leh in la daawado.
Inkasta oo ay soo jiidasho leh oo lagu tilmaamo Kawaii iyadu wax dareen ah oo shakhsi ah ma soo saarto haba yaraatee. Sidii aan idhi, run ahaantii ma helayo cidda aan u malaynayo inaan u naxariisto, sababtoo ah hubaal maaha Sento. Hamigeeda iyo cabsideeda waxay la mid yihiin dhammaan shaqaalaha kale ee ABP, dhab ahaantii, waxay u badan tahay inay ku jirto booska ugu fiican, marka loo eego muuqaalkeeda, waxay si fudud u heli kartaa shaqo kale oo dhaqaale ahaan qiimo leh, sida tusaale ahaan jilaa. .
Waxay sidoo kale haysataa (si uun) "Qoryaha Musket", kaas oo ah nooc ka mid ah hubka Qarnigii 18-aad? Waxay inta badan u hanjabtaa Kanie iyo jilayaasha kale iyada oo si joogto ah u siidaaya. Ma aha in ay muhiim tahay laakiin taasi waxay ku saabsan tahay waxa kaliya ee xiisaha leh ee aan ku xasuusan karo dabeecadeeda 12-kii qaybood oo dhan, taas oo aan ahayn wax wanaagsan.
Ugu dambeyntii waxaan leenahay Princess Latifa Fleuranza Kaas oo aan ka helay laakiin aad uga cadhaysiisay. Inkasta oo ay qarisay in ay hayso xanuun halis ah oo nafta halis gelinaya. Sidoo kale waligeed si dhab ah uma riixin hadafyadeeda beerta Kanie in badan, aragtidaydana runtii uma qalmin in la dhigo booskaas, marka la eego da'da noolaha iyo dembi la'aanta suurtagalka ah.
Caadi ahaan waxa ay ku hadashaa cod macaan oo jilicsan oo aanay waligeed in badan adeegsan. Run ahaantii ma hayso wax dabeecadeeda ka dhigaya mid xiiso leh marka laga reebo xaqiiqda ah in ay qabtey jirro halis ah oo ay ahayd amiirad hadda.
Waxaan u maleynayaa inay jeclaatay Kanie? Haddii ay iyadu ahayd, kuma ay daalin in ay dhammeeyaan wixii dhex maray labadooda. Waxay samayn karaan xoogaa diidmo ah Sento sidoo kale taas oo aan u maleeyay inay tahay fikrad wanaagsan oo suurtagal ah, laakiin sida iska cad ma jiraan wax sidaas oo kale ah markaa ha kicin rajadaada.
Jilayaal-hoosaad - Amagi Brilliant Park mudan in la daawado?
Sababaha Amagi Brilliant Park ay mudan tahay in la daawado
Jilayaasha laftoodu waa nooc gaar ah oo waxay noqon karaan nooc qosol leh mararka qaarkood, haddii aad ku jirto dhammaan dabcan. In kasta oo ay la mid tahay in aan daawanayo bandhigga carruurta. Waxaa laga yaabaa in ay aniga kaliya tahay laakiin ma hubo, naqshadeynta sawirka aan aad uga helay taxanaha si aan halkaas ugu siiyo ammaan.
Waxaa jiray muuqaallo aad u wanaagsan oo aan kor u eegayay anigoo u malaynaya inay wanaagsan yihiin. Waxay leedahay sheeko firfircoon oo wanaagsan taasoo ay fududahay in lala socdo oo la ogaado cidda aad u xididayso. Laakiin waan ogahay inay jiraan dad badan oo aan raadinayn ilmahan shay. Tani waxay mararka qaarkood ka hortagtaa caajisnimo, maadaama aad la yaabban tahay sida beertu uga bixi doonto xaaladdan gaarka ah, iyo sida Sento iyo Kanie ay u badbaadin doonaan.
Haddii aad raadinayso fudud, farxad iyo farxad bilow iyo sheeko nooca dhamaadka ah markaas ABP adigaa leh. Waxaan ka helay astaamaha walaalaha si qurux badan u soo jiidanaya, intooda badan waxay ahaayeen bimbos in kastoo midkoodna uusan lahayn xirfado dhab ah. Laakiin dabcan waxaan lahaan doonaa daawadayaal jecel dhammaan ficillada bustaysan. Amagi Brillaint Park hubaal waxay leedahay qaar ka mid ah kuwaas ha werwerin.
"Amagi Brilliant Park" Qaybta 3aad
Sababaha Amagi Brillaint Park Aanay Mudnayn In La Daawado
Daacadnimo, way adagtahay in laga fikiro sababaha loo daawado ABP. Laakiin waxaan filayaa inay ku xidhan tahay nooca qof ee aad tahay. Sababtoo ah aniga, ABP ma ahayn waxa aan rabay. Waxay ahayd bilow cad in la dhammeeyo iyada oo aysan jirin sheeko kale oo sheeko kale u socota jihooyin kala duwan ama si ka duwan sidii aan moodayay inay tahay. Waxaan aragnay xal cad oo lagu xallinayo dhibaatada tanina waxay ahayd mid ka mid ah dhibaatooyinka ugu waaweyn aniga markii aan daawanayay ABP. Laakiin marka hore aan dhibaatadayda ugu weyn ka saarno jidka.
Inta badan jilayaasha hoose, gaar ahaan mascots-yadu aad bay u dhibsadeen waanan nacay dhamaantood. Runtii xitaa iskuma dhibin daawashada khaaska ah (oo ahaa dub) anigoo aad ugu farxay in ay dhamaatay manaan codkooda dib dambe u maqlin. Taas, waan uga mahadceliyey. Laakiin haa, codadka mascots-ku waa xanuun, ma aha in la xuso Sento, kaas oo iga xanaajiya in ka badan inta uu iga cadhaysiiyo. Waxay u egtahay in sheekadan si fudud loo qori lahaa.
Waan ogahay in anime-ku aanu sinaba waaqici ahayn laakiin ABP gabi ahaanba ma aha mid dhab ah si kastaba ha ahaatee, qaab ahaan iyo qaab ahaanba. Inta badan dhacdooyinku waxay ka soo horjeedaan dhammaan dhinacyada xitaa caqli-galnimada ugu yar. Daawadayaasha raadinaya khilaaf u dhexeeya jilayaasha iyo dhagarta sirta ah markaas ma doonaysid inaad ku dhegganaato. Amagi Brilliant Park runtii taasi ma bixiso, waxay bixisaa sheeko fudud oo leh dhibaato cad iyo xal.
Ma jirin wax dhammaatay ama khiyaamo sheekadu si kor loogu qaado saamiga. Waxa ay ahayd nooc xiiso leh in la daawado oo aan waligay xiisaynayay markii walaalaha ay samaynayeen qaar ka mid ah qoob-ka-ciyaarka nacasnimada ah si ay u helaan macaamiil badan. Taxanaha oo dhami runtii wuxuu ahaa mid la illoobi karo oo weligay iskuma dhibin inaan daawado waxyaabaha gaarka ah sidaan hore u sheegay.
Amagi Brilliant Park waxay soo saartaa aura gaar ah oo nasasho iyo qosol leh, laakiin sheekadu maaha mid qosol badan ama xiiso leh sida anime kale oo aan arkay. Haddii aad raadinayso meel aad u adag oo ah nooca "sharafyada sare" ha ku dhibin ABP, laakiin haddii aad raadinayso wax aad ku qosliso oo aad sidoo kale nasato, waxaan ku siin doonaa tallaal.
In kasta oo hal shay oo aan ka helay ABP ay ahayd ka baxsashada. Xaqiiqda ah in Kanie sida iska cad uusan ahayn da'da oo uu maareeyo inuu wax walba ka saaro iyadoo la kaashanayo Sento iyo jilayaasha kale ee kale waa mid cajiib ah. Waxaan u malaynayaa inuu da'diisu tahay 17-19 jir. Tani waxay ka dhigeysaa mid aad loola yaabay waxayna ina siinaysaa rajo iyo yaab marka aan u maalgalino isaga ahaan dabeecad ahaan.
Waxaan sidoo kale aragnaa xirfadaha Sento qaybihii hore marka tas-hiilaadka beerta ay bilaabaan inay buuxdhaafaan sababtoo ah roobab aad u badan ayaa da'aya. Waxaan u maleeyay in tani ay siisay dabeecadeeda xoogaa qoto dheer, waxayna ka dhigtay mid xiiso badan oo soo jiidasho leh.
Bandhigyada la daawado bedelkii Amagi Brilliant Park
Waxaa jira bandhigyo badan oo aad daawato halkii aad ka daawan lahayd ABP, halkan waxaa ku yaal qaar aan soo jeedin lahayn. Inkastoo ay ku xiran tahay qofka aad tahay qof ahaan, dadka qaarkiis waxay jecel yihiin ABP sida ay tahay. Ma hubno nooca ABP ee hoos yimaada, laakiin waxay noqon kartaa qayb nolosha ah iyo tacabur. Ma tixgelin lahayn jacaylka, marka la eego duruufaha.
Waxaan soo ururinay qaar aan isku mid ahayn iyo kuwo aan isku mid ahayn. Waxaan rajeyneynaa inaad ku raaxaysan doonto dhamaantood.
Dheh waan ku jeclahay
Kaguya Sama (Jacaylku waa dagaal)
Immisa Dumbbells ah Oo Aad Qaadid
Dugsi Sare Dugsi Sare
Sida had iyo jeer boostada blog-kan kaliya waa in lagu ogeysiiyo. Waxaan rajaynaynaa in balooggan, sida dhammaan kuwayada kale, uu waxtar u lahaa inuu kuu sheego sidii ay ahayd. Waxaan hiigsaneynaa inaan soo bandhigno waxyaabo badan oo sidan oo kale ah. Haddii aad rabto inaad nagu caawiso, fadlan like-saar blog-kan, oo la wadaag haddii aad awooddo. Waxaad sidoo kale isku qori kartaa si laguugu soo diro emayl mar kasta oo aan dhajino blog cusub.
Qiimeynta: 3 5 XNUMX.
Waxaad sidoo kale ku qori kartaa kanaalkayaga YouTube halkan: https://www.youtube.com/channel/UCRYkAdQhzg2HYxWoZrKmgdw?view_as=subscriber
Aad baad ugu mahadsantahay akhrinta, waxaan kuu rajeyneynaa wanaag.
Ma jeceshahay ciyaar aad u dheeraysa oo aad ku qaboojiso? Isku day Chaz Valley, ciyaar xor ah, wax buuq ah oo ku lug leh, kaliya madadaalo saafi ah!
Ciyaarta Dooxada Chaz
Tags: amagibrilaintparksento amagibrillaintparkreview amagibrillianrparkreview amagibrilliantpark amagibrilliantparkfullarticleview anime magibrillaintparkworthit? ismagibrillaintparkqiimaha daawashada? ismagibrilliantparkqiimaha daawashada sababo la yaab leh parkis ma mudan in la daawado sababo la yaabban parkis ma mudan in la daawado sababo la yaab lehparkist mudan in la daawado dib u eegistaamagibrilliantpark sentoamagibrilliantpark ma in aan daawado magibrilliantpark?
Pingback: Seiya Kanie - Xogta Dabeecada - Muuqaalka Cradle
Gelitaan Hore Dugsiga Sare ee Dadka Dhintay - Xanta 2-da Xilliga + Fikradaha
Gelitaanka Xiga Anime 5-ta Jaceyl ee ugu sareeya